Chokwadi chiri kuseri kweWhite White, ngano yehama Hama Grimm | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fantasy, Type, Nhoroondo yezvinyorwa, Nyaya
Chokwadi chiri shure kweWhite White.
Disney yakatanga nhoroondo yayo yemaficha maficha mafirimu ne Blancanieves, nyaya iyo, mufirimu, izere nenziyo, mafaro uye kushushikana kudiki. Nepo iyi nyaya inozivikanwa ichinzi yakataurwa neHama Grimm, vamwe vanoti ngano yakura kwazvo.
Wese munhu anoziva nyaya, musikana akanaka anovengwa naamai vake vokurera, anomusvibisa uye muchinda anodakadza anomununura uye vari kufara nekusingaperi. Kunyangwe iwo makuru achinongedzera segirazi, iyo apple muchetura uye kristini bhokisi rinogara riripo, pane zvimwe izvo Disney zvisingaverenge.
1 Misiyano chaiyo pakati peshanduro
1.1 Kuedza kuuraya
1.2 Muchinda anopenga
1.3 Kupera kwaamai vokurera
2 Zvinyorwa zvinozivikanwa
3 Snow White, ngano chaiyo
Misiyano chaiyo pakati peshanduro
Amai vokurera vanoedza kuuraya Snow White katatu: kutanga netambo yemutsipa, yaanoedza kumuturika nayo; ipapo nekamu ine muchetura, iyo yaisingakwanise kupinda mudehenya; uye pakupedzisira apuro ine muchetura.
Muchinda anonunura mwanasikana wamambo, asi kwete pakutsvoda, awkwardly anoda kuona akanaka akafa, uye anogumburwa achigogodza pamusoro peiyo urn. Nekurohwa, Snow White inosvipa apuro rine muchetura.
Kupera kwaamai vokurera
Zvisinei, mutsauko unotyisa zvikuru ndiko kuguma kweanosimudza nhanhoMune vhezheni yekutanga yenyaya iyi yekuGerman Muchinda anova Mambo nekuroora Snow White, vanosarudza kushanyira hushe hwepedyo kuzopemberera.
Pakusvika pamuzinda waamai vokurera vakaipa, avo vanokatyamadzwa nekuvapo kwemambokadzi mutsva uyu, Snow White naMambo wake vafunga kumuranga nekuda kwekuedza kwake kuuraya. Saka Mukadzi akashata anopiwa shangu dzvuku-inopisa simbi dzaanofanira kutamba nadzo kusvikira afa.
Shure kwenyaya iyi pane kurudziro iri pachena mumadzishe maviri anozivikanwa:
Countess Margaretha von Waldeck, akaberekwa muna 1533.
Kutanga, Vaviri nhamba vane vabereki vakafanana vakabatikana avo vaisavapo kuti vavachengete uye vanaamai vakafa nguva pfupi vachangosununguka, vachivasiya mumaoko evana vamai vokurera vasina rudo, kutaura zvishoma.
Iyo nyaya yaCountess Margaretha ine zvimwe zvinoda kuziva izvo zvinomubatanidza iye kune iyo ngano. Kuverengera uku kwakakwidziridzwa naamai vokurera vakamuzvipira kuti afambe kubva kudare kuenda kudare kusvika asvika kuBrussels. Zvinonzi pano aive akadanana naMambo weSpain, Felipe II, izvo zvakakonzera kuti Margaretha aiswe muchetura nenhengo dzedare.
Eckhard Sander, munyori wenhoroondo, uye munyori wezvemhuri, Waldeck Erthal, MB Kittel vanoti madiki manomwe munhoroondo anoreva vana venzvimbo iyi., uyo aishanda kubva achiri mudiki mumigodhi. Kushaya zvinovaka muviri hakuna kuvabvumira kukura, uye yunifomu dzebasa, kusanganisira ngowani, dzinoenderana nembatya dzinowanzofungidzirwa kumadzviti manomwe e Blancanieves.
Countess aive nerudo rwakanyanya uye nemutsa kune vana ava., ivo vanoti akauya kuzotamba navo, kuvaimbira uye nekupa mamwe maawa ezuva rake kuzuva. Zvirokwazvo mukati Snow White, sekuvamwe vazhinji Nyaya dzehama dzeGrimm, pakanga paine pesvedzero dzinozivikanwa kubva muzviitiko chaizvo.
Kana zviri zveBaroness Maria Sophia, fananidzo rakakura. Nzvimbo yenhare yake nenzvimbo dzayo dzakatenderedza zvakafanana zvikuru netsananguro dzinoshandiswa nehama Grimm mune yavo ngano.
Kune izvi girazi raive naamai vokurera vaMaria Sophia rakawedzerwa kwariri. Chakanga chiri chipo chakabva kuna baba vomusikana. Iyi yakanga yaunzwa kunze zvakanyanya kubva kuSpain, nekuti, panguva yacho, aive magirazi anozivikanwa kwazvo nekuda kwehunhu hwezvinhu zvavo uye nebasa rakaomarara ravakapihwa.
Girazi hombe rinoyera 1,60 metres, parizvino inoratidzwa muSpessart Museum, uye ine aphorism iyo yakati "Amour Propre." Nekuda kwemutsara uye kujekesa kwekuratidzira kwawo, zvakanzi "girazi rinotaura."
Kunyangwe Maria Sophia anga asina muchetura, sango rakakomberedza imba yake yemberi rakazadzwa neBelladonna, Chibereko chine Atropa belladonna. Ichi chinhu rudzi rwe narcotic iyo inogadzira yakajairika mitezo yakafanana neye kufa.
Ikosi yegirazi uye shangu dzedare ndidzo dzimwe pfungwa dzinoshandiswa nevanyori venhoroondo kubatana Blancanieves nenharaunda yeLohr, kwakazvarirwa bharoni. Kwenguva yacho, Lohr aive nechuma chakachengetwa chemaminerari, uye izvi "zvishongedzo" zvaive mumiriri wekusununguka kwavakawana kwazviri.
Blancanieves, nyaya chaiyo chaiyo
Kana isu tikaisa pamwechete nyaya dzevaviri vakuru uye kufanana kwehupenyu hwavo Blancanieves tinogona kuziva izvozvo nyaya yacho haisi yekunyepedzera sekuita kwayo. Sezvawaverenga, kuguma kunosiririsa kwaamai vokurera uye nehukasha hwehama 'nyaya yekuda kuuraya haina chekuita neanomwe madiki madiki uye mhuka diki dzinoyevedza dzinoperekedza Disney Princess.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Chokwadi chiri shure kweWhite White